AirPods, AirPods Max ary AirPods Pro dia tsy manohana feo tsy misy fatiantoka ao amin'ny Apple Music | Avy amin'ny mac aho
Omaly dia hita fa vonona ny hanampy endri-javatra vaovao amin'ny Apple Music i Apple. Tsy misy very na inona no mitovy, audio tsy misy fatiantoka. Zava-baovao tsy mampino, mahatonga ny fizarana an'i Apple amin'ny famindrana sy fihainoana mozika na dia akaiky kokoa ny hafa toa an'i Tidal aza. Na izany aza, misy vaovao ratsy: AirPods, AirPods Max, ary AirPods Pro dia tsy manohana feo tsy misy fatiantoka.
Nanambara i Apple fa manomboka amin'ny volana Jona, ny hira Apple Music dia ho azo alefa amin'ny endrika lossless tsy misy fihoarana avo lenta, fa ny audio lossless kosa tsy hotohanana amin'ny AirPods, AirPods Max, na AirPods Pro. Misy mahatakatra zavatra ve?
Ny audio Apple lossless dia nohaingoina ho rakitra codec audio lossless an'ny Apple, miaraka amin'ny kalitao tsy misy fatiantoka manomboka amin'ny playback 16-bit 44,1 kHz ka hatramin'ny 24-bit 48 kHz ary playback Hi-Res Lossless izay manome kalitao 24 kHz 192-bit. Ny AirPods, AirPods Pro ary AirPods Max dia voafetra amin'ny codec Bluetooth AAC rehefa ampiarahina amin'ny iPhone ary tsy ho afaka handefa rakitra tsy misy fatiantoka Apple Music. Ka farafaharatsiny mba nanamafy i Apple a T3
Nanamafy ny orinasa fa afaka maheno an'ity rakipeo tsy misy fatiantoka ity amin'ny a iPhone, iPad, Mac na Apple TV. Voalaza koa fa ao amin'ny HomePods. Ity zava-baovao Apple ity dia tsy voafehy loatra ary manolotra kinova marina kokoa amin'ny fizotry ny firaketana studio. Manome sehatra mavitrika midadasika kokoa hamoahana antsipiriany sy zava-misy amin'ny mozika.
Ny endrika avo lenta sy tsy misy fatiantoka dia mila USB digital ho an'ny mpanova analog na fitaovana mitovy amin'izany, fa hanome ny traikefa tsara indrindra amin'ny feo. Ankehitriny ho an'ny tsara indrindra rehetra: ny fihainoana feo tsy misy fatiantoka amin'ny iPhone dia mitaky finday an-tariby. Ezaka maro tokoa manala ireo tariby ary miverina any aminy izahay. Tsy mino raha tsy Mahita.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » AirPods, AirPods Max, ary AirPods Pro dia tsy manohana feo tsy misy fatiantoka amin'ny Apple Music
Miseho ny "Unboxings" voalohany an'ny iMac 24-inch vaovao
Apple dia manolotra ny fotoam-pianarana Apple Today amin'ny tenin'ny tanana any Etazonia ho toy ny taratry ny andro GAAD manerantany